माघ २, काठमाडौं । अखिल छैठौंका अध्यक्ष विमल पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको समुह र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको समुहमा भिन्नता नरहेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले दुवैको रणनीति सत्ता प्राप्तीमा मात्रै केन्द्रीत भएको बताए ।
प्रचण्ड–नेपालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग आन्दोलन नभई सत्ता साझेदारीको निर्लज्ज प्रस्ताव राखेको पोखरेलको भनाई छ । प्रचण्ड–नेपाल संविधान र संसदको नभई सत्ता साझेदारीको बार्गेनिङमा रहेको उनले बताए ।
प्रचण्ड नेपालले देउवासँग पुगेर संयुक्त आन्दोलनको होइन, निर्लज्ज तरिकाले सत्ता साझेदारीको प्रस्ताव गरे ! सत्ताको होइन,…
Posted by Bimal Pokharel on Thursday, January 14, 2021
सामाजिक सञ्जालमार्फत पोखरेलले भनेका छन् – प्रचण्ड नेपालले देउवासँग पुगेर संयुक्त आन्दोलनको होइन, निर्लज्ज तरिकाले सत्ता साझेदारीको प्रस्ताव गरे ! सत्ताको होइन, कुरा संविधान र संसद विघटनको हो । संसद विघटनविरुद्धको आन्दोलन सत्ता साझेदारीको बार्गेनिङमा पुगेर यति छिट्टै नाङ्गेझार हुनेछ भनेर कसैले सोचेको थियो रु ओलीलाई जस्तै यिनीहरूलाई पनि संविधान र संसद होइन, सत्ता चाहिएको हो ।
गत बुधबार प्रचण्ड र नेपालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्दै सत्ता साझेदारीको प्रस्ताव राखेका थिए । तर, देउवाले भने उक्त प्रस्तावमा असहमती राखेको कुरा सार्वजनिक भएको छ ।
अब मोबाइलबाट दुई लाखसम्म भुक्तानी गर्न मिल्ने